Ciidamada ammaanka oo saaka Muqdisho ku qabtay gaari walxaha qarxa lagu soo raray – STAR FM SOMALIA
Ciidamada ammaanka oo saaka Muqdisho ku qabtay gaari walxaha qarxa lagu soo raray
Ciidamada ammaanka ayaa saaka oo Talaado ah ku qabtay agagaarka Isgoyska Sayidka gaari walxaha qarxa lagu soo raray, maalin kadib markii qarax xoogan lagu weeraray Xarun ay leeyihiin Ciidamada Nabadgalyada wadooyinka ee Taraafiko.
Saraakiisha laamaha ammaanka ayaa sheegay in gaarigan ay ku raad-joogeen, ayna hayeen xogtiisa, waxaana saaka la xiray qeyb ka mid ah wadada Maka Al-Mukarama, si ay saraakiisha miino baarista ay u kala fur furaan gaariga qaraxa saarnaa.
Lama sheegin cid loo qabtay gaarigaas, hase ahaatee goob joogayaal ayaa sheegay in la dhigay meel ku dhow goob ciidamada booliska ku leeyihiin bar koontarool.
Maalmihii u dambeeyay ayaa waxaa isa soo tarayay gaadiidka waxyaabaha qarxa sida ee ay ciidamada ammaanka gacanta ku dhigayeen, iyadoo saraakiisha ay sheegeen in la doonayo in shacabka lagu dhibaateeyo.
Maalintii shalay ayay aheyd markii illaa lix ruux ay ku geeriyootay qarax ismiidaamin ah oo lagu qaaday xarunta Ciidanka Taraafikada, waxaana qaraxaas sheegatay inay ka dambeysay kooxda Al-Shabaab.
Al-Shabaab oo sheegay inay ka hortageen weerar Ciidamo Mareykan ku soo qaadeen Toora-Toorow